Karama – Politika
Étiquette : <span>Karama</span>
20 août 20197 mai 2020Toe-karena
Anisan’ny fampanantenana nataon’ny filohan’ny repoblika nandritra ny fampielezan-kevitra ny fisondrotan-karama. Nasondrotra ny karama farany ambany isam-bolana andraisana mpiasa eto Madagasikara. Maro ny vokatra naterak’izany. Zomà 31 mey 2019. Manoloana ny vavahadiben’ny faritra afaka haba iray eny Tanjombato izay natokana ho an’ny orinasan’ny tao-java-baventy eto an-drenivohitra. Manondro amin’ny dimy hariva ny oram-pamataranandro. Faran’ny volana ny andro....